7 Ihe ị ga-eme tupu dịrị Android Devices
7 ihe na-eme n'ihu dịrị Android Devices
Dịrị gị gam akporo ngwaọrụ-ahapụ gị nweta gburugburu na-agaghị emeli setịpụrụ gị emeputa. Na ị na-enwe ike iji wepụ bloatware, adị n'elu ekwentị gị, wụnye ọhụrụ version, Flash a ROM, na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-awụlikwa elu ka mgbọrọgwụ usoro, e nwere 7 ihe ị ga-eme tupu dịrị gị Android ngwaọrụ.
1. ndabere gị Android Ngwaọrụ
Gị mgbe ihe ga-eme n'oge dịrị usoro. Iji zere ihe ọ bụla data ọnwụ, na-eme a ndabere maka ngwaọrụ gị bụ mara mma dị mkpa ma dị mkpa. Ego otú ndabere Android ngwaọrụ >>
2. Battery bụ a ga-
Elegharala batrị larịị nke gị android ngwaọrụ. Dịrị pụrụ ịbụ awa arụ ọrụ maka a newbie. Ọ bụ omume na gị Android nwụrụ na dịrị usoro ruru ka a drained batrị. Ya mere, eme ka n'aka gị batrị na ebubo 80%. Kwesịrị, m nwere ike ikwu a 100% ebubo batrị.
3. Wụnye Dị Mkpa Ọkwọ ụgbọala maka gị gam akporo ngwaọrụ
Gbaa mbọ hụ na ị nwere download na arụnyere ndị dị mkpa ọkwọ ụgbọala maka gị Android ngwaọrụ na kọmputa. Bụrụ na ọ bụghị, download ọkwọ ụgbọala si ukara website gị emeputa. Ọzọkwa, ị ga-eme ka USB debug na gị android ngwaọrụ. Ma, i nwere ike ghara mgbọrọgwụ.
4. ịchọta onye kwesịrị ekwesị dịrị Method
A dịrị usoro-eme ezi n'ihi na otu onye Android ngwaọrụ, nke apụtaghị na ọ na-arụ ọrụ maka gị. Ị ga-mara n'ụzọ doro anya banyere ngwaọrụ gị kpọmkwem. Dị ka ngwaọrụ kpọmkwem, chọta a Suite dịrị usoro.
5. Gụọ na Watch dịrị Tutorial
Ọ bụ oké n'ihi ị na-agụ ọtụtụ isiokwu banyere dịrị Nkuzi na na-na n'uche. Nke a na-eme ka ị na-anọ nwayọọ na mara zuru ezu dịrị usoro. Ekiri ụfọdụ video nkuzi ma ọ bụrụ na ọnọdụ ikike. A video nkuzi bụ mgbe mma karịa larịị okwu dị mfe.
6. Mara Olee otú iji Unroot
Ohere inweta bụ na unu nwere ike nsogbu na dịrị ma na-achọ unroot iji nweta ihe niile azụ nkịtị. Iji mee ka ihe na mbụ n'oge ahụ, ị ​​nwere ike ugbu chọọ na internet ina mara ụfọdụ Atụmatụ banyere otú unroot gị android ngwaọrụ. N'ezie, ụfọdụ dịrị software nwekwara ekwe ka ị unroot Android ngwaọrụ.
7. gbanyụọ Antivirus na Firewall na gị PC
Ụfọdụ antivirus ma ọ bụ firewall Mbido pụrụ igbochi gị dịrị usoro. Ike iṅomi niile faịlụ na ị ebudatara maka dịrị dị ka ọ pụrụ iwere dị ka a malware ma ọ bụ virus. E wezụga na, gbanyụọ gị antivirus ma ọ bụ Firewall tupu dịrị.
Nke ahụ bụ 7 ihe na-eme n'ihu dịrị Android. Ọ bụrụ na ihe niile na-akawanye njikere, i nwere ike na-amalite na kwụsịrị gị gam akporo ngwaọrụ.
Mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S5 iji nweta ihe niile n'okpuru Control
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Your Samsung Galaxy S4 (Iji Odin na CWM)